Qaababka Doji iyo Burburinta: istiraatiijiyad aan tilmaam ahayn oo loogu talagalay ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah | vfxAlert official blog
Qaababka Doji iyo Burburinta: istiraatiijiyad aan tilmaam ahayn oo loogu talagalay ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah
Tilmaamayaasha falanqaynta farsamada waxay bixiyaan faa'iido deggan oo ku saabsan xulashooyinka binary . Bilowgu waxay u muuqdaan inay ku dhejiyaan jadwalka sida ugu macquulsan iyagoo ilaaway mabda'a ah "macluumaad badan marwalba ma fiicna." Waad ka ganacsan kartaa iyaga la'aanteed adoo isticmaalaya falanqaynta laambadda.
Habka waxaa lagu soo saaray Japan oo ilaa 2.6 qarni si weyn isma badalin ilaa maanta. Waxaa ka mid ah in ka badan 200 oo qaab, laakiin istiraatiijiyaddu waxay adeegsanaysaa laba ka mid ah oo keliya, oo isla markiiba lagu dabaqi karo ganacsiga xitaa ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee loogu talagalay dadka cusub .
Sawirka ayaa muujinaya qaab dhismeedka shumaca. Istaraatiijiyaddu ma isticmaasho "hooska", barta furitaanka ee xulashada waxaa lagu go'aamiyaa cabbirka "jirka".
Qaabka ugu horeeya ee muujinaya isbeddelka isbeddelka wuxuu noqon doonaa "Bullish / Bearish engulfing" - jirka shumaca hadda jira wuxuu gebi ahaanba xiraa jirka kii hore. Waxaan ku fureynaa ikhtiyaarka furitaanka shumaca saddexaad.
Qaabka xiga «Doji». Calaamadda ugu adag ee dib u noqoshada oo lagu muujiyey qayb gaar ah oo falanqaynta shumaca. Xeerka aasaasiga ah - had iyo jeer had iyo jeer waxaa jira shumac «Doji» muhiimadda ay leedahay waa. Caadiga ah «Doji», sicirka xiritaanka wuxuu u dhigmaa qiimaha xiritaanka +/- dhowr shilin. Ikhtiyaarku wuxuu ka furmayaa shumaca saddexaad ka dib muuqaalka "Doji".
Si kastaba ha noqotee, shumacyada noocan oo kale ah (xitaa haddii ay been yihiin) waxay u baahan yihiin ganacsade ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaar gaar ah; haddii kale, waxaad khasaare weyn ka heli kartaa isbeddellada isbeddelka fiiqan!
Shumacyada ma noqon karaan go'aanka kaliya ee go'aan qaadanaya. Qaababku waxay muujinayaan oo keliya suurtagalnimada in suuqa uu ka laaban doono ama uu sii wadi doono isbedelka hadda socda. Xaqiijin dheeraad ah waxay noqon doontaa vfxAlert ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah oo ka shaqeynaya tilmaamayaasha farsamada.
Haddii shumacyada labaad ay ku jabaan heerar taageero / iska caabin xoog leh, tani waxay xoojineysaa calaamadda;
Waxaad dooran kartaa istaraatiijiyad taxaddar leh oo tartiib tartiib ah u kordhinaysa booska maaddaama calaamadda la xaqiijiyay.
Haddii aadan furi karin macaamil bilowga ama barta xoogga leh ee shaxanka, ha u raadin meel laga soo galo oo uusan dhab ahaan ka jirin. Falanqaynta shamaca waa in had iyo jeer lagu taageero qalab farsamo, gaar ahaan heerarka taageerada / iska caabinta. Ka eeg dhaqdhaqaaqa qiimaha dhowr jadwal, joogitaanka kaladuwanaansho iyo isbeddello fiiqan oo mugga ah.
Newbie's badanaa waxay ku ganacsadaan shaybaar, iyagoo ilaaway in xaalada suuqa aan waligeed lagu celin 100%. Isku-darka shumaca ee keena macaash sanad ka hor ayaa hadda u horseedi kara khasaaro. Waxaan ubaahanahay xakameyn joogto ah horumarka saxda ah ee qaababka!
Aan soo koobno . Falanqaynta laambadda waxay ku habboonaan doontaa ugu yaraan 10-20 sano oo kale, inkasta oo kororka isticmaalka AI iyo HFT ee ganacsiga. Inta badan macaamilada saamiyada wali waxaa sameeya dadka, taas oo macnaheedu yahay in mabaadi'deeda ay sii wadi doonto inay shaqeyso oo ay sameyso calaamado ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah .